Izibalo zesifo seswekile eMzantsi Afrika - South Africans with Diabetes
Izibalo zesifo seswekile eMzantsi Afrika
Sonke kufuneka sithethe nge-sifo seswekilwe esiphambi kohlobo lwesi-2 lwesifo seswekile. Ukuba kukho into enye ubhubhane wentsolongwane yeKhorona osifundise yona, kukuba siyakwazi ukwenza utshintsho olukhulu xa kufuneka njalo. Njengesizwe, abemi boMzantsi Afrika bangamanyana bakhusele impilo yethu. Kodwa ngelixa i-COVID-19 iboniswa njengesoyikiso esikhawulezileyo, esikhulu, ubhubhane olandelayo wezempilo uthe cwaka-kwaye uyatshabalalisa. Umceli mngeni wethu olandelayo ulapha, kwaye sisifo seswekile.
Ubhubhane wesifo seswekile eMzantsi Afrika
Jonga umntu ongasekhohlo nasekunene kwifowuni elandelayo yeZoom. Omnye wenu nobathathu unesifo seswekile. Awuyi kuyibona ngokukhawuleza njengentsholongwane yeKhorona , kwaye akukho phantse umdla weendaba ojikeleze yona, kodwa ingozi iyinyani-kwaye iyakhuselwa. Isifo seswekile sesona sibulala amanina eMzantsi Afrika, ngokweStats SA. Ingakhokelela kubumfama, ukunqunyulwa kwamalungu omzimba, isifo sentliziyo. Kodwa ayisiyiyo imeko ebulalayo – hayi ukuba uyazi ngayo, kwaye wenze iinguqu ezimbalwa ezilula.
⅓ usemngciphekweni wokuba nesifo seswekile
Siwafumana phi la manani? Abantu abathathe inxaxheba kuvavanyo lweswekile yegazi yasimahla kwiNyanga yeSwekile yeSizwe (ngoNovemba 2019). I-35% yabo yayineswekile ephezulu yegazi ngokungaqhelekanga, ibabeka kuluhlu lwabantu abanganesifo seswekile sodidi lwesibini . Enye i-5% yafunyaniswa njengenesifo seswekile.
Uphando olusandula ukukhutshwa loMzantsi Afrika loBalo lwaBantu kunye nezeMpilo ngo-2016 lubonisa ukuba la manani asezantsi ngokwenene. Banika ingxelo yokuba uninzi lwabasetyhini (i-64%) kunye namadoda (i-66%) yesifo seswekile esiphambi kodidi lwesibini (inqanaba le-HbA1c elihlengahlengisiweyo le-5.7% -6.4%). “Yiyo ke loo nto, uninzi lwabantu abadala bengazi ngemeko yabo okanye bengazi ukuba basemngciphekweni wesifo seswekile.”
Iswekile kunye ne-COVID-19
Yintoni eyenza oku kungxamiseke, ewe, inyani yeyokuba abantu abanesifo seswekile basesichengeni se-COVID-19. Izinga lokufa liphezulu phakathi kwabo banesifo seswekile, ukutyeba kakhulu kunye noxinzelelo lwegazi. Ke inyani yeyokuba ubuncinci kwisithathu sabantu bethu sinesifo seswekile esingenalo ulwazi ngayo oko kuthetha ukuba sisemngciphekweni omkhulu weziganeko ze-COVID-19.
Yintoni isifo seswekile esikubeka emgciphekweni wokuba nodidi lwesi-2?
Umbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) uthatha amanqanaba eswekile yegazi engaphantsi kwe-5.5mmol / l njengesiqhekileyo. Ezo ze-7mmol / l nangaphezulu zithathwa njengeswekile. Phakathi kwala manqaku mabini okusika kukho uluhlu lwe-prediabetic: 5.5 ukuya ku-7mmol / l. Iindaba ezimnandi? Ukuba unesifo seswekile esikubeka emngciphekweni wokuba nodidi lwesi-2, unokwenza utshintsho kwindlela otya ngayo nakwindlela ophila ngayo kwaye ubuyise amanqanaba eswekile yegazi kuluhlu oluqhelekileyo. Oku kunciphisa ngokumangalisayo umngcipheko wokuphuhliswa kohlobo lwesibini lweswekile. Kodwa kuphela ukuba uyazi unayo!
Ngokwe-WHO, i-80% yeziganeko zesifo seswekile, i-80% yesifo sentliziyo kunye ne-40% yomhlaza inokuthintelwa ngokuphepha icuba, ukwandisa ukusebenza komzimba nokwamkela ukutya okusempilweni. Kuyaziwa kwihlabathi liphela ukuba ukuthintela isifo seswekile ngokutshintsha indlela ophila ngayo kubalulekile kwaye konga iindleko
Yintoni le, sisipho: isilumkiso kwangaphambili ukuba umzimba wakho ufuna uncedo ukukhusela imeko enganyangekiyo. Siza kunika iingcebiso ezongezelelekileyo malunga nendlela yokuguqula isifo seswekile esikubeka emgciphekweni wokuba nodidi lwesi-2kwiveki ezayo.
Fumanisa okuninzi malunga nokuphila kakuhle nesifo seswekile ngokundwendwela iSweet Life ku www.sweetlife.org.za okanye kubantu abantu basemMzantsi Afrika abanesifo seswekile baseMzantsi Afrika abaneswekile kuFacebook.
Okungakumbi malunga nedatha:
Ngexesha leNyanga yeSwekile yeSizwe, inani leekhemesti ezinje ngeeClicks, Dis-Chem kunye neAlphaPharm zibonelela ngovavanyo lweswekile kwigazi simahla. Sikwazile ukubamba idatha ngo-Allegra, odale ulwazi olupheleleyo lotshintshiselwano lwabo bonke abachaphazelekayo njengoncedo lwezonyango, iinkampani zeinshurensi, iikhemesti, iiklinikhi zeekhemesti- kunye nezigulana. Zonke zidityanisiwe.
UAllegra Ukuxhobise uluntu olunesifo seswekile lweSweet Life , ngokutshintshiselana ngolwazi lwabo lwezempilo, ukufumana umfanekiso wobungakanani besifo seswekile eMzantsi Afrika. Oku kubonisa indlela esinokuthintela ngayo ukunciphisa ubunzima kunye neendleko zonyango ezingeyomfuneko. Idatha yahlalutywa nguPercept. Sibonile ukuba kwiiseti zedatha eyi-16,477 (eyayinayo yonke idatha efunekayo), i-60% yayineswekile esegazini eqhelekileyo, i-5% yayinemilinganiselo kwinqanaba leswekile kwaye i-35% eyoyikisayo yayingabantu abasemngciphekweni wedidi lesi-2.